MATIU 10 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 10)
“Mgbe unu na-aga, unu etinyela ego ọ bụla nꞌakpa unu, ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo. Ma ọ bụkwa ụdị ego ọzọ dị iche.
Unu ejikwala uwe abụọ, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ abụọ, ma ọ bụ mkpa nꞌaka. Nꞌihi na ọ bụ ọrụ ndị unu na-enyere aka inye unu nri, na ilekọta unu.
Abịara m ime ka nwanta nwoke megide nna ya, ka nwanta nwanyị megide nne ya, ka nwụnye nwa megide nne di ya.
Ọ bụrụ na ị hụrụ nna gị na nne gị nꞌanya karịa m, ị kwesịghị ịbụ onye nke m. Ọ bụrụ na ị hụrụ nwa gị nwoke, ma ọ bụ nwa gị nwanyị nꞌanya karịa m, ị kwesịghị ịbụ onye nke m.
Ndị nile nabatara unu na-anabata m. Mgbe ha nabatara m, ọ bụkwa Chineke onye zitere m ka ha na-anabata.